Iingcebiso zokuFumana nokuThuthukisa iiNdaba zeThuba
Amabali okuThuthukisa angabonelela ngokubalulekayo abafundi
Amabali okuqhubela phambili asetyenziswa ukuba abe yecandelwana yeendaba ezigcinwe kwimpawu ezikhanyayo, njengeefashoni ezintsha okanye umboniso wethelevishini okhangayo abaphulaphuli abangalindelekanga. Kodwa akuzona zonke iimeko eziphambili ezixhomekeke kwiinkcubeko kwaye kuxhomekeka apho ubika khona, iindwendwe edolophini yakho ziyahlukahluka ukusuka kwisixeko kwelinye ilizwe okanye ilizwe.
Kukho indlela eyahlukileyo yokubhala ibali malunga nentombazana yokuthunyelwa kwemiyalezo yokuthumela imiyalezo ngaphandle kwebali malunga nomdlalo omtsha wevidiyo.
Kodwa zombini ezo zinokuthi zithathwe njengamabali athile.
Ngoko ufumana njani ibali leendlela, kwaye uyayifaka njani indlela yakho yokuhambelana nesihloko? Nazi izicwangciso ezimbalwa zokufumana nokunika ingxelo ngeendlela.
Yazi Ukubika Kwakho Ukubetha
Ukugqithisa ngakumbi ukubetha, nokuba kukubethelwa kwendawo (njengento yokugubungela uluntu lwasekuhlaleni) okanye ingqungquthela (njengemfundo okanye ukuthutha), ngokulula uzakukwazi ukubona izimo.
Abambalwa abanokuthi bathuthuke kwi-beat beat: Ngaba ngaba ootitshala abaninzi banokuthatha umhlalaphantsi kusasa? Ngaba ngabafundi abaqhubela phambili esikolweni kuneeminyaka edluleyo? Ngamanye amaxesha uya kuba nokubona ezi ntlobo ngokuzigcina kwaye ube nemithombo ephuhlisiwe kakuhle, njengabazali kwisithili sesikolo okanye ootitshala.
Hlola iiRekhodi zikaRhulumente
Ngamanye amaxesha umkhonto awuyi kuba lula ukubona, kwaye ungadinga okungaphezulu kweenkcukacha zokuqala ukulungiselela ukuba ibali liphi. Kukho imithombo emininzi yolwazi oluntu, njengemibiko yamapolisa, kunye neengxelo ezivela kwi-arhente karhulumente ezinokukunceda ukubonisa umgangatho ongeke uqiniseke ngoku.
Ngokomzekelo, ekubetheni kwamapolisa, unokwazi ukubona ezininzi zokubanjwa kwezidakamizwa okanye ubusela bezithuthi kwindawo ethile. Ngaba oku kungabonakalisa ingqumbo enkulu yolwaphulo-mthetho okanye ingxaki ngeziyobisi ezigeleza kwindawo?
Ukuba uya kusebenzisa idatha kwiirekhodi zoluntu ekunikeni ingxelo (kwaye kufaneleke ngokuqinisekileyo), kuya kufuneka ukwazi ukuba ufake ifowuni yesicelo somntu.
Ikwabizwa ngokuba yi-FOIA (Freedom of Information Act), isicelo esifanelekileyo seseburhulumenteni sokwenza ulwazi oluntu olutholakalayo.
Ngamanye amaxesha i-arhente iya kugxeka ngokumalunga nezicelo ezinjalo, kodwa ukuba ngaba ulwazi oluntu, kufuneka banikeze isizathu esisemthethweni sokunganiki iinkcukacha, ngokuqhelekileyo kwisithuba esithile.
Gcina Amehlo Akho Avulekele Imiphumo
Iindaba ezihamba phambili aziveli nje ekubetheni ingxelo okanye kwiirekhodi zoluntu. Unokwazi ukubona umendo nje kwimisebenzi yakho yansuku zonke, nokuba kusekudleni apho ufumana ikhofi yakho, i-barbershop okanye i-salon yeenwele, okanye ilayibrari.
Iikholeji zeekholeji ziindawo ezifanelekileyo zokujonga izinto eziqhelekileyo, ingakumbi kwimpahla kunye nomculo. Kukulungele ukugcina iliso kumajelo asekuhlaleni, nangona naluphi na uhlobo oluthile oluqaphelayo mhlawumbi liya kuphawulwa ngamakhulu abantu nabanye. Injongo ukulandelela phantsi nokuba yintoni eyenza i-buzz ngexesha elide ngaphambi kokuba libe lidala endabeni.
Yazi Ukufunda Kwakho okanye Abaphulaphuli
Njengaye naluphi na unolwazi, kubalulekile ukwazi abaphulaphuli bakho. Ukuba ubhala iphephandaba kwi-suburb kunye nokufunda kwakho ngabantu abadala kunye neentsapho kunye nabantwana, bangayi kuba yintoni na kwaye bafuna ukwazi ngani?
Kuye kuwe ukuba ufumane ukuba yeyiphi imimiselo eya kuba nomdla kubafundi bakho kwaye yiyiphi into ayayiqaphela ngayo.
Qinisekisa ukuba Umkhwa Wakho Ngokwenene Umkhangeli
Ngamanye amaxesha abalobi beendaba bahleka ngenxa yokubhala ibali malunga neendlela ezingaqhelekanga. Ngoko qiniseka ukuba nayiphi na into oyibhalayo yinyani kwaye ayiyiyo ingcamango yomntu othile okanye into ebambalwa abantu abayenzayo. Musa nje ukuqaqa ibali; yenza ingxelo ukuze uqinisekise ukuba oko ubhalayo ngokuqinisekileyo kunokwenene.
I-Automobile kunye neGrassary
IYunivesithi yaseCentral Oklahoma Admissions
Uthando lweGemini kunye neVirgo
Yintoni i-'Bogey 'Score kwiGalofu?
Ukongeza Ugxininiso ngesiNgesi - IiFom ekhethekileyo